Dagaalka Afghanistan: Turkiga oo ay foodda is dari doonaan Taalibaankii uu Mareykanka isaga tagay | Gaaroodi News
Dagaalka Afghanistan: Turkiga oo ay foodda is dari doonaan Taalibaankii uu Mareykanka isaga tagay
August 13, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Erdogan ayaa xaqiijiyay in uu la dagaallamayo Taalibaan
Kooxda Taliban ayaa si aad ah u xoogeysatay kaddib markii ay Mareykanka iyo xulafadiisa reer Galbeedka isaga baxeen dalka Afghanistan, balse Turkiga wali doonaya inuu ku cararo garoonka garoonka diyaaradaha ee Magaalada Kabul, si uu amnigiisa u sugo.
Wasiirka Gaashaandhigga ee Turkiga, Hulusi Aker ayaa Arbacadii sheegay in ay faa’iido weyn ku jirto xaqiijinta in uu garoonka Kabul sii furnaado, go’aanno arrintaas la xiriirana la gaari doono maalmaha soo socda.
Mr Aker oo ku sugnaa safaaradda Turkiga ee magaalada Islamabad ayaa sidoo kale Khamiistii sheegay dowladdiisu ay ku jirto wadahadallo ku saabsan sidii uu ula wareegi lahaa howlaha garoonka Kabul.
“Ma jiri doonaan wax howlo diblomaasiyadeed ah oo ka socon doona dalka Afghanistan haddii albaabbada la isugu dhufto gegida diyaaradaha ee Kabul,” ayuu yiri Aker.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: “Waa sidaas sababta aan u dooneyno in garoonka Kabul uu sii furnaado. Maalmaha soo socda wax ku saabsan arrintaas ayaa dhici doona.”
Laakiin kooxda Taalibaan ayaa uga digtay Turkiga inuu ciidamo geeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul.
Sida ay Tabisay Wakaaladda Wararka ee Reuters, Turkiga ayaa raba in uu Kabul ciidamo geeyo xilli ay faraha ka sii baxeyso xaaladda Afghanistan, maadaama kooxda Taliban ay wadaan weerar ay waddankaas ku qabsanayaan.
Xoogagga Taliban ayaa maalmihii lasoo dhaafay gacanta ku dhigay inta badan magaalooyinka waaweyn ee wadankaas.
Hase yeeshee dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay il gaar ah ku heyso xaaladda ka taagan Afghanistan.
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa ka dalbaday madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu ciidamo u diro garoonka Kabul kaddib markii ay Afghanistan ka baxeen ciidamada NATO.
Wareysi uu madaxweyne Erdogan Arbacadii siiyay telefishinka CNN ee laga leeyahay Mareykanka ayuu ku yiri; “Waxaa dhici karta inaan Taliban kala hadalno qalalaasaha ka socda Afghanistan. Hay’adaheenna qaabilsan arrimahaas ayaa ka shaqeynaya sidii aan ula kulmi lahayn madaxda Taalibaan. Aniga qudheyda waxaan la kulmi karaa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha Taalibaan.”
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha Pakistan, Imran Khan, ayaa sheegay in uu ku howlan yahay dadaallo la xiriira sidii uu miiska wadahadalka isugu keeni lahaa Turkiga iyo Taalibaan.
Arbacadii ayuu Khan warbaahinta caalamiga ah u sheegay hadalkaas kaddib markii uu Islamabad kulan kula yeeshay wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga.
Imran Khan ayaa yiri: “Aad bay u fiicnaan lahayd haddii Turkiga iyo Taalibaan ay u wada hadlaan si fool ka fool ah. Labada dhinac waxa ay ka xaajoon karaan sida ay muhiim u tahay in garoonka Kabul uu amni ahaado. Sababtaas darteed ayaan ula hadleynaa Taalibaan si ay wadaxaajood tos ah ula furaan Turkiga.”
Muxuu Turkiga awooddiisa milatari ugu fidinayaa dibadda?
Mareykanka, Ruushka iyo Turkiga oo ka wadahadlaya colaadda Suuriya iyo Ciraaq
Ra’iisul Wasaare Khan ayaa sheegay in dowladda Afghanistan ay aaminsan tahay in Pakistan ay wax u sheegi karto Taalibaan laakiin sida dhabta ay adag tahay inay wax ka dhaadhiciyaan madaxda kooxdaas.
Muxuu Turkiga u doonayaa garoonka diyaarada ee Kabul?
Garoonka diyaaradaha ee Kabul waxa uu ku yaallaa meel u dhow xaafadda ay ku yaallaan dhammaan safaaradaha dalalka caalamka ay ku leeyihiin Afghanistan, waana meel aad istiraatiiji u ah.
Sidoo kale garoonkan waxa uu si buuxda isugu xiraa Afghanistan iyo caalamka intiisa kale. Waxa uu kaalin weyn ka qaataa in gargaarka la gaarsiiyo dadka ku dhibaateysan waddankaas ay dagaalladu halakeeyeen.
Sida uu qoray bogga Daily Sabah ee laga leeyahay Turkiga, gegidan diyaaradaha waa waddada kaliya ee lagu soo badbaadin karo diblomaasiyiinta caalamka ee ku sugan Afghanistan, haddii ay xaaladdu faraha ka baxdo.
Afghanistan waxay dunida kale ka go’eysaa isla marka ay dagaalyahanada Taalibaan la wareegaan gacan ku heynta garoonkaas.
Sidaas darteed dowladda Afghanistan waxay dan ugu jirtaa in ay aqbasho yabooha Turkiga ee ku aaddan sugidda amniga garoonka diyaaradaha ee Kabul, waxaana ugu jirta labo faa’iido.
Tan koowaad waa in ilaalineyso xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka reer Galbeedka, tan labaadna waa in uu sii furnaado albaabka kaalmada bani’aadannimo.
Taalibaan diyaar ma aha
Hoggaanka kooxda Taalibaan ayaa uga digay Turkiga arrintan, iyagoo sheegay in go’aanka ku saabsan la wareegista amniga garoonka diyaaradaha ee Kbaul – kaddib bixitaankii ciidamada Mareykanka – uu yeelan karo cawaaqib xumo aad u weyn.
Sida ay tabisay warbaahinta Mareykanka ee Bloomberg, afhayeen u hadlay Taalibaan, oo lagu magacaabo Zabiullah Mujahed, ayaa Turkiga u sheegay isbuucii lasoo dhaafay in tallaabada noocaas ah ay tahay “mid talo xumo ah, xad gudub ku ah madaxbannnida dhul ahaaneed ee ay u leeyihiin waddankooda, kana ka soo horjeedda danahooda qaran”.
Balse, dowladda Afghanistan ayaa shegetay in waajibaadka ciidamadooda amniga ay tahay inay ilaaliyaan garoomada diyaaradaha, iyagoo raalli ka noqonaya inay caawinaad ka helaan waddan kasta oo saaxiib la ah, ayna soo dhaweynayaan.
Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa soo xigatay la taliye dhinaca amniga u qabailsan wasaaradda amniga qaran ee Mareykanka, Jake Salivan, oo u sheegay bishii lasoo dhaafay in kulan ay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayna isku raaceen in Turkiga uu tago Afghanistan kaddib marka ay ka baxaan ciidamada Mareykanka.
Ismari waaga Erdogan iyo Taalibaan
Mas’uuliyiinta Taliban ayaa yabooha Turkiga uu ku sugayo amniga garoonka Kabul ku qeexay “wax laga yaqyaqsoodo”. Hadal ay soo saareen ayay ku dhaheen: “Ciidan walba oo shisheeye ah oo ku sugan dalkeenna waxaan u aragnaa kuwo xoog nagu qabsaday.” Taalibaad ayaa si deg deg ah ku qabsatay dhul aad u ballaaran
Dhanka kale, madaxwewyne Erdogan, oo warfidiyeenka kula hadlayay magaalada Istanbul, ayaa sheegay in fikirka Taalibaan iyo hab dhaqankooda uusan ahayd mid sax ah.
“Sida aan qabno ra’i ahaan, habka fikir ee Taalibaan ma aha midka laga rabo inuu qof Muslim ah kula dhaqmo qof kale oo Muslim ah,” ayuu yiri Erdogan.
Waxa uu Taliban ugu baaqay inay sida ugu dhakhsiyaha badan caalamka u tusaan in nabadgalyo lagu soo celiyay Afghanistan.
“Taalibaan waa inay joojiyaan qabsashada dhulka ay walaalahood ku nool yihiin,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Turkiga ayaa sannadihii dambe awooddiisa militari ku fidinayay dalalka dibadda, isagoo howlgallo ka fuliyay qaar ka mid ah meelaha ay dagaallada sokeeye ka dhaceen.
Suuriya, Liibiya iyo Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay ciidamada Turkiga ka sameeyeen dhaqdhaqaaqyada la taaban karo